Food Archives - Shop
Shop > All Articles > Beauty > Food
Food, Lifestyle, Lifestyle, Social Causes
လွယ်ကူမြန်ဆန် အာဟာရရှိတဲ့ Matcha Pancake လုပ်စားကြမယ်!022
The KaungHtet May 17, 2022 10:25 am May 17, 2022
မေလ ၂၁ ရက်နေ့ဟာ International Tea Day ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ လက်ဖက်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသောအားဖြင့် လက်ဖက်အမျိုးအစားတွေထဲက တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Matcha (လက်ဖက်စိမ်း) နဲ့ ပန်ကိတ်ပြုလုပ်နည်းကို Shop App မှ တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ …
World Bee Day မှာ ပျားရည်မုန့်တွေလုပ်စားမယ်0222
The KaungHtet May 5, 2022 9:11 am May 5, 2022
မေလ (၂၀) ရက်နေ့မှာကျရောက်မယ့် ကမ္ဘာ့ပျားလုပ်သားလေးများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသောအားဖြင့် ပျားရည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ သရေစာ (၁၀) မျိုးကို Shop App မှ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း ကုန်စို ကုန်ခြောက်များကို Shop App ရဲ့ Shop …
မိနစ် (၃၀) တည်းဖြင့် အီတလီ စပါကတ်တီနှင့် အသားလုံးခေါက်ဆွဲ ပြုလုပ်နည်း0115
The KaungHtet April 27, 2022 7:26 am April 27, 2022
[ENG Below]ဝန်ခံလိုက်ပါ။ လူတော်တော်များများက မီးဖိုချောင်ထဲမှာ နေ့စဥ် အချိန်ကြာကြာမကုန်ဆုံးချင်ကြဘူးဆိုတာ။ (Professional Chef တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ရင်ပေါ့) ပုံမှန်စား‌သောက်နေကြ အစားအစာတွေနဲ့လည်း ကွဲထွက်ပြီး ကလေးရော လူကြီးပါကြိုက်ကြတဲ့ ညစာ/ဟင်းပွဲတစ်ခုကို အချိန် (၃၀) မိနစ်တည်းနဲ့ ချက်ပြုတ်လို့ရတဲ့ အီတလီ …
Community, Food, Home improvement, Lifestyle, Lifestyle, Others, Social Causes
အိမ်တွင်းသင်္ကြန် ကျင်းပမယ်0339
The KaungHtet April 6, 2022 10:15 am April 7, 2022
ယခုလို ကိုဗစ်ကာလအခြေအနေများကြောင့် မိမိအိမ်မှာ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေရင်း မြန်မာ့နှစ်သစ် အတာသင်္ကြန်အရသာမပျက်ဘဲ ဘယ်လိုပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မလဲဆိုတာ Shop App နဲ့အတူ ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်! သင်္ကြန်အတွက်လိုအပ်မယ့်ပစ္စည်းမျိုးစုံကို လျှော့စျေးတွေနဲ့ Shop App တွင်ဝယ်ယူရန် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ” သင်္ကြန်အပြင်အဆင်အိမ်တွင်းသင်္ကြန်ပြုလုပ်ရန် ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အချက် မိမိအိမ်တွင်းကို …
Beauty, Beauty, Fashion, Fashion, Food, Lifestyle, Lifestyle, Others, Social Causes, Technology
Shop App မှတစ်ဆင့် ကိုရီးယားသို့ အလည်တစ်ခေါက်0599
The KaungHtet March 29, 2022 3:00 am March 29, 2022
မတ်မှ မေလအတွင်းသည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ပြီး လည်ပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို ခရီးသွားလာရေးခက်ခဲတဲ့ကာလမျိုးမှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်သကဲ့သို့ ခံစားစေရမယ့် အတွေ့အကြုံကို Shop App နဲ့အတူ ဖန်တီးလိုက်ကြအောင်!! Shop App ကို Download ပြုလုပ်ရန် …
Let’s Bake Katy Perry’s World’s Best Cherry Pie0201
The KaungHtet March 17, 2022 9:44 am March 17, 2022
(ENG BELOW) ကမ္ဘာကျော်ရဲ့ တေးသံရှင် Katy Perry က ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ Bon Appétit သီချင်းကို promote ရန်အတွက် သူမကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ Cherry Pie ပြုလုပ်နည်းကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ …
ကော်ဖီချစ်သူများအတွက် ကော်ဖီဖျော်စက်0396
The KaungHtet March 1, 2022 7:08 pm March 21, 2022
Happy First Day of March and Let’s get ready to step into Summer!မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစပြီး နှစ်သစ်ရဲ့ နွေသစ်မှာ ကံကောင်းခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ Shop App …
Beauty, Beauty, Community, Fashion, Fashion, Food, Health, Lifestyle, Lifestyle, Shop Event, Social Causes
Best Valentine’s Day Gifts For Your Partner – အချစ်အတွက်လက်ဆောင်0528
The KaungHtet February 10, 2022 5:08 am March 2, 2022
We agree with the fact that “everyday is Valentine’s Day”, but 14 of February is the best day to show …
Community, Food, Social Causes
World Nutella Day 2022 (ကမ္ဘာ့ Nutella နေ့)0351
The KaungHtet February 3, 2022 3:44 am March 2, 2022
[ENG Below]ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်မယ့် ကမ္ဘာ့ Nutella နေ့ကို Shop App MM မှဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသောအားဖြင့် Nutella ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းကို ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Blog အစီအစဉ်မှာ ဗဟုသုတရဖွယ် တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီရောက်ရှိတော့မယ့် ချစ်သူများနေ့ …
New Year, New Recipes – Burmese Cuisines0420
The KaungHtet January 6, 2022 4:28 am January 7, 2022
As the new year has come, people love to explore new things including food. If you are bored with casual …
၃ သိန်းကျပ်အောက် Samsung တံဆိပ်ဖုန်းများ 3810
အိမ်မှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ် Printer လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလား? 🤔 3412